एजेन्सी । कण्डोमबारे सामान्य जानकारी नहुने सायदै होलान् । कण्डोम अहिले कतिपयका लागि अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य साधन पनि बनिसकेको छ ।
– कण्डोमको प्रयोग कति पूरानो हो तपाईंलाई थाहा छ ? फ्रान्सको एक गुफामा यसको आकार बनाइएको पाइयो । मानिन्छ कण्डोमको प्रयोग पन्ध्र हजार वर्ष पहिलेदेखि हुँदै आएको छ । स्वीडेनमा पनि सबैभन्दा पूरानो कण्डोम पाईएको थियो ।
– कण्डोम पाउन पहिले निकै मुस्किल पर्थ्यो । अमेरिकामा डाक्टरको प्रेस्किप्सनपछिमात्रै कण्डोमको प्रयोग सम्भव हुन्थ्यो । यसलाई सन १९२८ बाट वेंडिङ मेसिनबाट निकालिएको हो । साथै सोची ओलम्पिकका दौरान खेलाडिहरुका लागि ओलम्पिक भिलेजमा एक लाख कण्डोम लगिएको थियो ।
– १६औं शताब्दीमा कण्डोमको आविरष्कार साइफलिसको बीमारी रोक्नका लागि गरिएको थियो । त्यतिबेला फ्रान्समा कैयन मानिस गुप्त रोग ‘साइफलिस’बाट मरिरहेका थिए । त्यतिबेलासम्म यो रोगको कुनै उपचार सम्भव भएको थिएन । ग्याबरियल फ्यालेपियोले यसको उपचार पत्ता लगाउन प्रयास गरे । उनले लिनन शीथ्सको एक केमिकल सोल्यूसनमा मिलाए, फेरि सुकाए । यो शीथ्सलाई पुरुषको लिंगमा लगाइयो अनि रिबनले बाँधियो । यसको प्रयोगबाट शारिरीक सम्बन्धका दौरान पनि साइफलिस हुन छाड्यो ।
– कण्डोममा प्रयोग हुने मेटिरियल प्राय बदलिइरहन्छ । कहिले यसलाई लेटेक्सबाट बनाइन्छ भने, कहिले विभिन्न जनावरका आन्द्राको प्रयोग यसमा गरिन्छ । यसलाईपछि लिनन, स्लिक तथा लेदरबाट बनाउने कोशिशसमेत भइसकेको छ ।
– सोह्रौं शताब्दीमा कण्डोम जनावरको आन्द्राबाट बनाइन्थ्यो । सोही कारण कण्डोम एकदमै महङ्गो पर्थ्यो, यसको प्रयोग कतिपयले दुई पटकसम्म गर्थे । उन्नाइसौ शताब्दीमा यो यति सस्तियो कि मानिसहरुले यसलाई एक पटक प्रयोग गरेर फ्याँक्न थाले । विस्तारै यो युज एण्ड थ्रो का लागि नै बनाउन थालियो ।
– यसलाई दुनियाँभरमा कैयन सेलिब्रेटीहरुले समर्थन गरेका छन् । सेफ सेक्सलाई बढावा दिनका लागि यसको जोडतोडका साथ प्रचार र प्रवर्द्धन हुँदै आएको छ ।
– के तपाईंलाई थाहा छ, मोर्डन कण्डममा एक ग्यालेन पानीसमेत अटाउन सक्छ । यसको प्रयोग सैनिकहरुले राईफललाई पानीबाट बचाउन तथा आगो सल्काउन पनि गर्ने गरेका छन् ।
– पछिल्लो केही दशक यता कण्डोमको आकार र टाइपमा निकै परिवर्तन आएको छ । यतिसम्म कि अहिले त कण्डोमहरु विभिन्न फ्लेबरदेखि लिएर अलगअलग प्रकारका लुब्रिकेटिड (आयल/ग्रीज)मा बजारमा उपलब्ध छ । यसलाई पहिले निकै नै गोप्य साधनका रुपमा लिइन्थ्यो तर अहिले आएर यो निकै सामान्य बनिसकेको छ ।
– के तपाईंलाई थाहा छ, इन्भिजिवल कण्डम बनाउनका लागि निरन्तर प्रयास जारी छ । यसलाई लगाउने बित्तिकै लिंगमा भएको तापक्रमका कारण त्यो त्यहीँ फिट हुन्छ र सुरक्षा पनि दिन्छ । प्रयोगपछि त्यसलाई निकाल्न पनि सकियोस् ।
खानापछि यसकारण खाइन्छ डेजर्ट
तपाईलाई थाहा छ गाँजर खानुको फाइदा ?
सामान्य घरेलु उपचारबाट केही दिनमै घटाउनुहाेस् तपाईंको पेट (विधिसहित)
चस्मा लगाउन मन छैन ? यो घरेलु औषघिले नै बढाउनुस् आँखाको रोशनी (प्रयोग विधिसहित)
के तपाईंलाई थाहा छ ‘शुक्रकिट’सँग जोडिएका यी तथ्यहरु
बदाम खानुहुन्छ ? ५ फाइदा थाहा पाउनुहोस्
इण्डोनेसियाली महिला यसकारण पिउँछन् सर्पको रगत, सुन्दैमा आङ जिरिङ्ग हुन्छ
दाँतको किरा मार्न र दुखाई कम गर्न अपनाउनुस् यी ४ घरेलु उपाय
खाने बेला नगर्नुहोस् यस्ता गल्तीहरु, नत्र हुनुहोला बिमारी
तरबुजाको बियाँले पत्थरीलाई यसरी निकाल्छ…
देश, वागमती प्रदेश, स्वास्थ्य
जुगल गाउँपालिका ३ मा एक हप्तामै ८४ जना बिरामी, कोरोनाको आशंका
राति केरा खान हुन्छ ?
गोलभेँडा मनपर्छ ? यो खबर पढेपछि हच्किनु हुनेछ
पुरुषले यसकारण खानुपर्छ अण्डाको पहेँलो भाग
सम्भोगका लागि यसकारण सहजै तयार हुन्नन् युवतीहरु
यी १० कारणले तपाईंको शुक्रकिटको क्षमता र गुणस्तर घट्छ